जातीय विभेद Archives - Khula Patra
चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’ को दोस्रो सिजन असोज २२ देखि प्रसारणमा आउँदैछ । जात सबैको साझा मुद्दा हुनुपर्छ र जातबारे सबै जातजातिले संवाद गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यको निर्माण गर्न समता फाउन्डेशनले उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमको यो सिजनमा अभिनेताद्वय राजेश हमाल र दयाहाङ राई, मानवअ...
अजित हत्याको पाँच वर्ष : न्यायको पखाईमा शव
काठमाडौँ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण काभ्रेबाट धादिङमा लगेर अजित मिजारको ‘हत्या’ गरिएको पाँच वर्ष पुगेको छ । यो सँगै अजित मिजारको परिवारले पनि न्याय पर्खेको पाँच वर्ष पुगेको छ । दोषीलाई कारबाही नभएसम्म अजितको शव नउठाउने अडान बाबु(आमाले लिएपछि न्यायको पर्खाइमा उनको शव शिक्षण अस्पताल महारा...
सरोकारवालाको एकै स्वर– जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ
सुशील विके, काठमाडौँ । दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका गर्नका लागि राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हुने वक्ताहरुले वताएका छन् । जातिय विभेद विरुद्ध विश्व मञ्च, ग्लोवल फोरमले आयोजना गरेको विभेद उन्मुलनमा राज्यको भूमिका विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्द...
रुपा सुनार प्रकरण: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध चौतर्फी विरोध [विज्ञप्तिहरुसहित]
काठमाडौँ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि कोठा भाडा लिनेक्रममा भएको जातीय विभेदको घटनामा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पीडकलाई छुटाएर विभेदको संरक्षण गरेको भन्दै देशव्यापी विरोध भएको छ । सरकारवादीमा मुद्धामा पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने सरकारका मन्त्रीले नै अनुसन्धान र मुद्धा प्रक्रियामा हस्तक्षे...
के अब कानुनी राज्य र बिधिको शासन सकिएकै हो ?
मीन विश्वकर्मा, कसैले घर भाडामा खोज्नु र कसैले भाडामा दिनु वा नदिनु अपराध होइन । तर, जातकै आधारमा दिन्छु वा दिन्न भन्नू सरासर विभेद हुन्छ । र त्यस्ता घटना जातिय विभेद जघन्य अपराधमा पर्ने र सरकारबादी र फौजदारी अपराध मानिएको छ । पत्रकार रुपा सुनारको घटना के भएको हो ? हामी तेस्रो ब्यक्तिलाई...
भोजपुर घटनाको नालीबेली: समाजले अन्तरजातीय विवाह छुटाएपछि यसरी भेटियो संगमको शव
प्रहरी र जनप्रतिनिधिले गाली बेइन्जति गरेर अन्तरजातीय विवाह छुटाइदिएपछि बेपत्ता भएका १८ वर्षे संगम ठटाल (परियार) तीन दिनपछि दुवै खुट्टा भुँइमा लत्रिएको र झुण्डिएको शंकास्पद अवस्थामा भेटिए । पोष्टमार्टम रिपोर्टले मृत्युको कारण ‘ह्याङ्गिङ’ भनेको छ । घटनाको दश दिन बित्यो, न उजुरी, न थप अनुसन्धान । ...
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १५ वर्ष: जघन्य हिंंसाको मारमा दलितको जीवन, राज्य भने उदासीन
काठमाडौँ । नेपाललार्इ छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष बितेको छ। तर, सदियौँ देखि विभेद र तिरस्कारको शिकार बनेको दलित समुदाय आफूप्रतिको दमन झन् कठिन बन्दै गएको महसुस गरिरहेको छ। यो अवधिमा मुलुकलार्इ संविधान र कानूनले छुवाछुतमुक्त मात्रै बनाएनँ, जातीय आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्ने र दण्डन...
रुकुम नरसंहारको एक वर्ष: पीडितले क्षतिपुर्ति पाए, न्याय पाएनन्
भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका ६ युवाको सामूहिक हत्या भएको वर्षदिनमा सोमबार भेरी नदी किनारमा लाखबत्ती बाल्दै पीडित परिवार काठमाडौँ । जातीय विभेदका कारण रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित छ जना युवाको हत्या भएको सोमबार एक वर्ष बितेको छ । तर, पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । एक वर्ष बित्दा पनि बल्ल अहिलेसम्...
रुकुम हत्याकाण्ड : एक वर्षमा थुनछेक बहस मात्रै, संसदीय समितिका सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्
काठमाडौँ । भेरी नदीको त्यही किनार, जहाँबाट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका मुनलाल विकले आफ्नो एक्लो छोरो नवराजको मृत शरीर बटुलेका थिए । सोमबार त्यहीँ उभिएर उनले छोराको स्मृतिमा लाखबत्ती बाले । ‘छोरो बितेको वर्ष दिन भयो । अब आँखा त रसाउन छाडे, तर मन भने भत्भती पोलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी...
चार महिनादेखि पार्किङ गरेको कारभित्र दलित बालकको शव : घटनाको छानविन र कारवाहीकालागि दलित आयोगको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । दाङमा दलित समुदायका तीन बालकको शव चार महिनादेखि पार्किङ गरेर राखेको कारभित्र नग्न÷अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोग र अन्य संघसंस्थाहरुले बालकहरुको अपहरण पछि हत्या गरिएको भन्दै घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न...
महाेत्तरी । बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडास्थित जनता माविका शिक्षक नेत्रबहादुर रम्तेलमाथि एक अभिभावकले जातीय दुव्र्यवहार गर्दै कुटपिट गरेका छन् । गौरीडाँडाकै मनीष अर्यालले शिक्षक रम्तेलमाथि जातिसूचक शब्दहरू प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गर्दै कुटेका हुन् । शिक्षक रम्तेलले शुक्रबार आफूमाथि भएको जातीय...
काठमाडौँ । कथित दलित युवकसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका-८ रामनगरीमा आफ्नै आमाले छोरीलाई जलाएर हत्या गरेको खुलेको छ। कात्तिक २९ गते लक्ष्मीपूजाको भएको यो घटनालाई सुरूमा ‘भवितव्य’ ठानिएको थियो। तर, अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले आमाले १५ वर्षीया छोरीलाई जलाएर मार...
नवराजका बा–आमालाई प्रधानमन्त्री ओलीको वचन, ‘ढुक्क हुनुस्, हत्यारालाई कारवाही हुन्छ ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवराज विक लगायत पाँच जनाको हत्यामा संलग्नहरुलाई सरकारले हदैसम्मको कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नवराज विक र उनका पाँच साथीका आमा–बाबु न्याय खोज्दै जाजरकोटबाट काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरुको टोलीसँग आइतबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटामा भेट गरी दोष...
चौरजहारी हत्याकाण्ड : मृतकका बाबुआमा न्याय माग्दै काठमाडौंमा
काठमाडौं । रुकुमको चौरजहारी हत्याकाण्डमा मारिएका नवराज विकसहित छ जनाको परिवार न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेको छ । हत्यारालाई कारवाहीको सट्टा उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै पीडित परिवारले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समिति मातहत रहेका विभिन्न दलका भात...
२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा नवराज विक, टीकाराम विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढामगर, सन्जु विक र गोविन्द शाहीको बर्बरतापूर्ण हत्या भयो। घटनामा अन्य १२ युवा घाइते भए। सरकारी, गैरसरकारी तथा संसदीय समितिको अध्ययनले उक्त हत्याकाण्ड जातीय विभेदका कारण भएको निष्कर्ष निकालेक...
काठमाडौँ । देशैभरि भइरहेको दलितहरुमाथि भएको हत्या, बलात्कार र विभेदका विरुद्ध काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन सुरु भएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र नागरिक समाजले माइतीघर मण्डलामा एक घण्टासम्म मौन प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरी हिरासतमा हत्या गरिएका शुम्भु सदा, विजय राम, रोशन विश्वकर्मा लगायत देश...
गुल्मी । जतीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा गुल्मीमा पहिलो पटक जिल्ला अदालतले पीडकलाई ३ महिना जेल सजायको फैसला गरेको छ । जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ फोक्सिङ्गका नेत्रबहादुर काउछा मगरलाई छुवाछुत तथा जातीय विभेद गरेबापत् न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतिको ईजालासले ३ महिना जेल सजायको फैसला गरेको हो । क...
जातीय विभेदको अर्को अपराध : दलितकी छोरी विहे गर्दा राजेन्द्रले आफ्नै बाबुको शव छुन पाएनन्
ताप्लेजुङ । जन्म दिने बाबुको निधनले धरधरी आँसु झरिरहेका बेला कसैले मृत शरीरलाई हेर्न र छुन मात्रै नभई दाहसंस्कारमा नै सहभागी हुन दिँदैनौँ भन्दा शोकमा डुबेका मानिसलाई कति पीडा हुँदो हो। त्यही पीडादायी परिस्थितिमा ‘हाम्रो कुल वंशबाट नै निकालिएको, तँ तल्लो जाति’ को भनेर आफ्नै दाजुभाइले नानाथरी गाली ग...
छुवाछूतकै कारण नौ वर्षमा १७ जनाकाे हत्या, यी हुन् घटना
काठमाडौँ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। ऐन लागू भएपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण १७ जनाको मृत्यु भएको जागरण मिडिया सेन्टरले जनाएको छ। केही महिनाअघि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज विकको अकालमा मृ...